/ e / OS: nharembozha yekubvisa Google | Linux Vakapindwa muropa
Android inoenderera ichinyanya kushandiswa sisitimu yekushandisa pane nharembozha. Iyi sisitimu yakavhurwa sosi, asi inosanganisira akati wandei mablog mablog uye zvakare yakawandisa huwandu hwe pre-yakaiswa masevhisi uye zvinoshandiswa kuti zviite iwo anoshanda. Aya masevhisi uye maapplication ari (ona GMS), ehe, izvo zveGoogle. Pane kudaro, mimwe mhinduro dzimwe nzira senge / e / OS Ivo vanogona kukubvumidza iwe kuti ubvise izvi zvese uye nekumisikidza yako zvakavanzika zvakanyanya.
Kunyangwe uchigona dhawunirodha iyo ROM uye ane isinganetsi installer, unogona zvakare kusarudza tenga nharembozha yakananga nehurongwa hwakatomisikidzwa, kuti zvive nyore kwauri kana usina hunyanzvi hwemakomputa kana uri kungotsvaga nyaradzo. Kune izvi, iwe unogona kuwana mamwe mamodheru ari kutengeswa muchitoro chavo chepamhepo.
Chii chinonzi / e / OS?
Kana iwe uchinetseka kuti chii chaizvo / e / OS, ndiyo inoshanda sisitimu yemafoni. Iyo yakavhurika sosi uye yemahara, yakatanga neFrench Gaël Duval, zvakare mugadziri weMandrake kugovera.
/ e / OS yakavakirwa paApple, kunyanya iri forogo yevakakurumbira LineageOS, isina mabhinari emabhinari uye ine firmware yakagadziriswa nenheyo inotsigira chirongwa ichi.
Tsiva iyo Google maapplication uye masevhisi, zvekuti inoremekedza zvakavanzika zvako zvakanyanya. Kuti uite izvi, zvinoshandisa iyo MicroG projekiti uye nzvimbo yenzvimbo yeMozilla. Saka unogona kutsiva GMS. Uye zvakare, mhinduro dzenhumbu dzakasanganisirwa kuzadza maburi mupuratifomu yeemail, kuchengetedza gore, nezvimwe zvishandiso.
Ehezve, inowirirana neyako anodikanwa maapplication ayo aripo natively eApple, ayo anovhura ayo mikana maererano nekuenderana. Ku kurodha maapplication ane Fdroid, uye zvimwe zvinyorwa, kutsiva Google Play. Sisitimu yekunyora maapplication akaitwawo zvinoenderana nezvibvumirano nevateveri veimwe neimwe, kupa rumwe ruzivo kumushandisi.
Parizvino ndizvo muchikamu che beta, asi yatove kushanda ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » / e / OS: nharembozha yekubvisa Google
Idzi inhau huru! Ndakapedza nguva ndichiisa mamwe maROM parunhare mbozha (handirangariri ikozvino zita reprojekti rakavaita, kunyangwe yaive nemukurumbira) uye nhamo yaive yekuti "chikamu cheGoogle" chaifanira kuwedzerwa. Paive pasina kuenda kana iwe uchida kuti foni iite inoshanda. Saka iyi sarudzo yaunotiunzira ndiyo nzira yekupedzisira kubvisa joko reG hombe, mashandisiro ayo asingakwanise kubvisa uye kunakidzwa nefoni inoteerera chete muridzi wayo, sezvazvinofanira kuve.
Pindura kuna aldobelus
Red Hat yakaunza masevhisi matsva akachengetedzwa masevhisi